သတင်း - Food Grade PU Hoses ဆိုင်ရာ မှတ်စုများ
ယခုအချိန်တွင် အစားအသောက်၊ ဆေးဝါးနှင့် အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် ပိုက်များထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် စီမံဆောင်ရွက်ရာတွင် အသုံးပြုရန်မှာ မလွဲမသွေဖြစ်သည်။ဥပမာ,အစားအစာတန်း PU ရေပိုက် ဖျော်ရည်၊ နို့၊ အဖျော်ယမကာ၊ ဘီယာစသည်ဖြင့် စားသောက်ကုန်ထုတ်မီဒီယာကို သယ်ယူပို့ဆောင်ရာတွင် အသုံးပြုသည်။ထို့ကြောင့်၊ ရှုထောင့်အားလုံးရှိ အစားအစာတန်း PU ပိုက်များ၏ လျှောက်လွှာလိုအပ်ချက်များသည် အတော်လေးမြင့်မားပြီး အစားအစာတန်း PU ပိုက်များတွင် ပလတ်စတစ်ဆားမပါဝင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ပိုက်တွင် ပလတ်စတစ်ဆားပါ၀င်သည်နှင့်အမျှ ၎င်းသည် အလယ်အလတ်ကို ညစ်ညမ်းစေမည်ဖြစ်သဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသော အစားအစာဘေးကင်းမှုကို အာမမခံနိုင်ပါ။စက်မှုလုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးတွင်အသုံးပြုသောရေပိုက်များအတွက်ရွေးချယ်ရေးစံနှုန်းကဘာလဲ။
သီးခြားအသုံးပြုမှုအတွက် မှန်ကန်သောပိုက်ကို ရွေးချယ်ရန်၊ အနည်းဆုံး အောက်ပါအခြေခံအချက်များကို ဆုံးဖြတ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
1. ဖိအား - စုပ်ယူမှု
အလုပ်ဖိအား သို့မဟုတ် စုပ်ယူမှုဖိအားကို ဆုံးဖြတ်ပါ၊ ဖိအားတန်ဖိုးထက် ကျော်လွန်သွားသည့် ဖိအားကဲ့သို့သော ရုတ်တရက် ဖိအားပြောင်းလဲမှုကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါက ရေပိုက်၏ ပုံမှန်ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကို ထိခိုက်စေမည်ဖြစ်သည်။
2. သယ်ဆောင်သည့်ပစ္စည်းများ၏ လိုက်ဖက်ညီမှု
ပို့ဆောင်သည့်ပစ္စည်း၏ ဂုဏ်သတ္တိ၊ အမည်၊ အာရုံစူးစိုက်မှု၊ အပူချိန်နှင့် အခြေအနေ (အရည်၊ အစိုင်အခဲ၊ ဓာတ်ငွေ့) ကို ဆုံးဖြတ်ပါ။အစိုင်အခဲပစ္စည်းသယ်ယူရာတွင်၊ အမှုန်အမွှားအရွယ်အစား၊ သိပ်သည်းဆ၊ အစိုင်အခဲပစ္စည်း၏ ပမာဏနှင့် ဝိသေသလက္ခဏာများ၊ အခဲထည်ပစ္စည်းများသယ်ဆောင်သည့်အရည်၏ စီးဆင်းနှုန်းနှင့် စီးဆင်းမှုနှုန်းတို့ကို နားလည်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
တည်နေရာ၊ ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်၊ စိုထိုင်းဆအခြေအနေနှင့် ထိတွေ့မှုကို နားလည်ပါ။ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်၊ အိုဇုန်း၊ ပင်လယ်ရေ၊ ဓာတုပစ္စည်းများနှင့် အခြားသော တက်ကြွသောဒြပ်စင်များကဲ့သို့သော အချို့သောပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများသည် ပိုက်၏အစောပိုင်းပျက်စီးခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။
ဆွဲငင်အား၊ တုန်ခါမှု၊ ကွေးညွှတ်မှု၊ တုန်ခါမှု၊ ဖိသိပ်မှု လှည့်ပတ်မှု၊ နှင့် အရှည်လိုက် သို့မဟုတ် အလျားလိုက် ဝန်များနှင့် ဆက်စပ်နေသည့် ကွေးညွှတ်အချင်းဝက်နှင့် ဖိစီးမှုများကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ပါ။
ပိုက်သည် ကောင်းမွန်စွာ ခံနိုင်ရည်ရှိသော၊ တုန်ခါမှု၊ သံချေးတက်ခြင်း သို့မဟုတ် ဆွဲငင်ခြင်းကြောင့် ရေပိုက်ကို ထိခိုက်ပျက်စီးစေနိုင်သော်လည်း၊ ထို့ကြောင့် ပိုက်တွင် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ကာကွယ်မှုကို လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
ရေပိုက်ကို ကြမ်းပြင်ပေါ်တွင် ထားသင့်သည်၊ ဆိုင်းငံ့ထားသင့်သည် သို့မဟုတ် နစ်မြုပ်နေခြင်းရှိမရှိ သိပါ။
7. ချိတ်ဆက်မှုများကို အသုံးပြုပါ သို့မဟုတ် ကြိုတင်ခန့်မှန်းပါ။
- ချိတ်ဆက်ကိရိယာများနှင့်အနားကွပ်များ- အမျိုးအစား၊ အရွယ်အစား၊ ချည်အမျိုးအစား၊ ရည်ညွှန်းစံနှုန်းနှင့် လျှောက်လွှာအမျိုးအစား၊
- Connector Core: အတွင်းအချင်း၊ အပြင်အချင်းနှင့် အလျား။
- အင်္ကျီလက်/ကိုင်ဆောင်မှု- အမျိုးအစားနှင့် အရွယ်အစား။
ကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်သေချာစေရန်၊ ရေပိုက်နှင့် အဆစ်အမျိုးအစားများသည် သဟဇာတဖြစ်စေကြောင်း သေချာပါစေ။ရေပိုက်တပ်ဆင်ခြင်း၏လုပ်ဆောင်မှုဖိအားသည် ထုတ်လုပ်သူ၏လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီရမည်။
အထက်ပါအချက်သည် သင့်အား ရေပိုက်ရွေးချယ်ခြင်းအား မိတ်ဆက်ပေးရန်အတွက် အချို့သောကိစ္စရပ်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုအပ်ပါသည်၊ ကျွန်ုပ်သည် စာဖတ်ပြီးနောက် သင့်အတွက် အကူအညီအချို့ကို ယူဆောင်လာပေးနိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။ပြီးနောက်၊ စျေးကွက်တွင်ရေပိုက်အမျိုးအစားများပိုမိုများပြားလာပြီးရေပိုက်ထုတ်လုပ်သူများသည်ရေပိုက်များကိုပိုမိုထုတ်လုပ်လာကြသည်။ထို့ကြောင့် ညံ့ဖျင်းပြီး သင့်လျော်မှုမရှိသော ရေပိုက်များဝယ်ယူခြင်းကို ရှောင်ရှားရန်အတွက်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဝယ်ယူရန် ပုံမှန်ထုတ်လုပ်သူများထံသွားပြီး မှန်ကန်သောရေပိုက်ကို ရွေးချယ်ရန် အမှန်တကယ် ပေးပို့မှုတောင်းဆိုမှုအရ ဝယ်ယူရမည်ဖြစ်သည်။